‘आत्मसन्तुष्टी, विद्रोह, कसैप्रति समर्पित र मुद्दाको लागि लेख्ने गर्छु ।’ –सुष्मा रानाहँमा - Naya Online
आइतवार, असार १३, २०७८ (June 27th, 2021 at 11:18am ) अन्तर्वार्ता, ब्रेकिंग न्युज
२०५० सालमा खोटाङको साविकको लामाखु हालको रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा जन्मेकी सुष्मा रानाहँमा कविता लेखनमा परिचित नाम हो । यो समयका अब्बल नारी हस्ताक्षर पनि हुन् । हाल वैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा कोरियामा रहेकी रानाहँमाको ‘आमाको तासफोटो’ कविता कृति बजारमा आएको छ । जुन कृतिले छुट्टै खालको चर्चा बटुलिरहेको छ । प्रवासको पीडा र कष्टहरू छँदै नै छ । त्यसको बाबजुद् पनि यती महत्वपूर्ण कृति आउनुलाई नेपाली कविताका आम पाठकहरूले निक्कै अर्थपूर्ण ढ्ङ्गले हेरेका छन् । आफूले टेकेको धरातल, किराँती मिथक र जनजातीय सौन्दर्यलाई कवितामा टपक्कै टिप्नु उनको काव्य कला हो । समग्र प्रवास बसाइको दैनिकी अनि ‘आमाको तासफोटो’ कविता कृतिसँग नजिक रहेर उनै सुष्मा रानाहँमासँग नयाँअनलाइनले गरेको कुराकानी ।
प्रवासी जीवन कसरी व्यतित गर्दै हुनुहुन्छ ?
धेरै जसो समय कार्यस्थलमै बित्छ । त्यो बाहेक घरको काममा पनि समय छुट्याउनु पर्छ । सप्तान्ह (सप्ताहिक बिदा), यहाँको राष्ट्रिय चाडपर्वहरू र सार्वजनिक बिदाको दिनहरूमा अलारामले समेत बिदा पाउँने भएर बिना योजना समय बिताउनुमा छुट्टै मज्जा छ ।
कोरोना महामारी आउनुअघि जस्तो व्यस्त हुन्न आजभोलि छुट्टिका दिनहरू ।
बिहान अबेरसम्म सुत्न पाउँनुपनि परदेशीको लागि ठूलै कुरा रहेछ । धेरथोर लेखपढ, घुमघाम, नजिकमा रहेको साथीहरूसँग भेटघाट यसरी नै बितिरहेछ ।
“आमाको तासफोटो”को प्रतिक्रिया कस्तो पाउदैहुनुहुन्छ ?
समग्रमा राम्रै पाइरहेकोछु । आशा नगरेको, अघिपछि बोलचाल नभएको पाठकहरूबाट समेत प्रतिक्रिया पाउँदा साँच्चै थकान पनि मेटिदो रहेछ ।
प्रतिक्रियादेखि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सन्तुष्ट छु । सङ्ग्रहमा पनि भनेकै छु ‘म कविता लेख्न सिकिरहेको हुनाले सबै प्रतिक्रियाहरू मेरा लागि स्वीकार्य हुनेछ’ भनेर ।
कविता लेखनमा कसरी होम्मिनु भो ?
कतिपय कुराहरू गर्छु भनेर नसोची गरिदो रहेछ, त कतिपय गर्छु भनेर सोचेपनि गर्न नसकिने रहेछ । सायद, यसैलाई जीवन भनिँदो हो । कवितै लेख्छु भन्ने सोच थिएन । सानो हुदाँखेरि रेडियोमा गीत सुन्यो गायिका बन्नु मन लाग्ने, केही मनपर्ने कार्यक्रमहरू सुन्यो रेडियो प्रस्तोता बन्न मन लाग्ने । फिल्म हेर्यो नायिका बन्नु मनलाग्ने । समाजका असल पात्रहरू जति सबै बन्नु मनलाग्ने ।
तर आफुले चाहेर पनि भन्न नसकेको, अथवा भन्नैपर्छ लागेको कुराहरू र खुसी व्यक्त गर्ने माध्यम भनेको स्कुले जीवनदेखि नै कविता थियो ।
तपाईंको कृतिको अघिल्तिरका कविताको तुलनामा बिट मरौनी तिरको कविताहरू धेरै नै अब्बल छन् पाठक वा समालोचकहरूको जिज्ञासा चैँ त्यो कविता लेखनको चेत के कसरी पाउनु भो ?
ठिक भन्नुभयो । कृतिभित्र समावेश भएका केहि कविताहरू आफैँलाई पनि त्यति चित्त बुझ्दो थिएन । यसको मतलब यो होईन कि, ती कविताहरू जबर्जस्ती लेखेको थिएँ । पुनर्लेखन नगरिएका केही कविताहरू समावेश भएको अवश्य हो । नराख्दा पनि हुन्छ लागेको भए पनि सङ्ग्रहको आवरणबारे प्रकाशन हाउससँग छलफल हुदाँ राख्नेमा परियो ।
फेरि सबै पाठकको रुचि उस्तै नहुन सक्छ भन्ने पनि लाग्यो । तर त्यहि कविताहरू मध्येबाट समेत प्रतिक्रियाहरूले हौसला लिएर आए ।
मध्य र बिट मरौनीतिरका कविताहरू पढ्नुहुने कतिले जिज्ञासा सहितको प्रश्नहरू पनि सोध्नु भएका छन् । ती कविताहरूले गर्दा केहिले मेरो उमेरपनि सोध्नु भ्याउनु भयो । आफ्नो भाव,विचारलाई सहि तरिकाले बुझिदिने पाठकहरूको प्रतिक्रिया पाउँदा खुब पुलकित भइँदो रहेछ ।
ती कविताहरूको लेखन चेत त मैले जन्मे, हुर्किएको माटो हो । संस्कार,संस्कृतिसँगै आफुले बाँचिरहेको समय र हाम्रो इतर अभियान (टिमको सुझाव, प्रेरणा)को उपलब्धि हो ।
“आमाको तासफोटो“ले सुष्मा रानाहँमालाई के दियो ?
थप जिम्मेवारी, चुनौतिसँगै जीवनमा लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने उत्साह दियो । पाठकहरूको माया त छदैछ ।
कविता के रैछ ? र केका लागि लेख्ने ?
समग्रमा कविता जीवन हो,आवाज हो ।जहाँ हामी भावना,विचार,विद्रोह,बिम्व,समाज,प्रेम सबै पाउँछौं । तथापि पूर्ण कविता लेख्ने सक्षमता, परिपक्वता अहिले नै म मा छैन ।
आत्मसन्तुष्टी, विद्रोह, कसैप्रति समर्पित र मुद्दाको लागि लेख्ने गर्छु ।
आगामी योजनाहरू के के छन् ?
–तत्काल सम्भव नभए पनि कथा लेख्ने अठोट छ । फेरि कविता नलेख्ने भन्ने चाहिँ होईन । अरुले लेख्नुभएको कथाहरू पढ्दा जति आनन्द आउँछ,भलै त्यसरी लेख्न नसकुँला । लेख्नलाई केही विषयवस्तुहरू भने छन् । जो मैले नै लेख्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । अर्को कुरा देश फर्किनु छ । पूरा गरिएला÷नगरिएला बाँचुञ्जेल सपनाहरूलाई पछ्याईरहनु छ ।
प्रवासमा श्रम गर्ने विदेशी श्रमिकले आफ्नो देश, परिवारलाई कति रेमिट्यान्स पठाईयो/पठाइन्छ? त्योसँगै समय चोरचार गरेर केही अक्षरहरूको समेत रेमिट्यान्स पठाउँनु पाउँदा आधा सन्तुष्ट छु । पुरै भइयो भने लेख्नै छोडिन्छ होला भन्ने डर लाग्छ ।